မတူညီသော SSD မျိုးကွဲများအား ခွဲခြားကြည့်ခြင်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > မတူညီသော SSD မျိုးကွဲများအား ခွဲခြားကြည့်ခြင်း
မတူညီသော SSD မျိုးကွဲများအား ခွဲခြားကြည့်ခြင်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 5:04 PM နည်းပညာဗဟုသုတ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Solid State Drive လို့ခေါ်တဲ့ SSD တွေက ကျနော်တို့နေ့စဉ်ထိတွေ့နေကျ ဟာ့ဒစ် (HDD) တွေထက်အဆများစွာပိုကာင်း ပိုမြန်တာတော့ဟုတ်တယ်
အဲလိုမြန်တာကိုမှ SSD တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမျိုးအစား မူကွဲအလိုက် အနိမ့်အမြင့်ရှိကြပြန်ပါသေးတယ်။
SSD ကို SATA, M2, PCIE (add-in card) ဆိုပီး သုံးမျိုးခွဲထားပါတယ်။
SATA SSD က 2.5လက်မမို့ ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ laptop ဟာ့ဒစ်တွေနဲ့ အရွယ်အစားတူညီပီး မြန်နှုန်းအနေနဲ့ 600MB/s အထိရှိပါတယ်။
SSD တွေထဲမှာ SATA က ဈေးနှုန်းအားဖြင့်အနည်းဆုံးဖြစ်တာမို့ SSD စတင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အများဆုံးရွေးချယ်လေ့ရှိတဲ့ အမျိုးအစားလည်းဖြစ်တယ်။
M2 က ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ကွန်ပျူတာ RAM နဲ့ ဆင်သယောင်ရှိပြီး သူ့ကို မားသားဘုတ်ရဲ့ M2 slot မှာ စိုက်ကာအသုံးပြုရပါတယ်။ (M2 slot ဟာ မားသားဘုတ်တိုင်းမှာမပါဝင်ပဲ Intel 6th gen Skylake မှသာစတင်ပါဝင်လာပါတယ်)
M2 ကို transfer protocol အနေနဲ့ နှစ်မျိုးထပ်မံခွဲခြားထားပါသေးတယ်၊ M2 SATA SSD နဲ့ M2 NVMe SSD ဆိုပီး။
M2 SATA နဲ့ M2 NVMe ဘယ်လိုတွေကွာလည်း ?
တပ်ဆင်ပုံ တပ်ဆင်နည်းကတော့အတူတူပါပဲ. . M2 slot လေးမှာ စိုက်လိုက်ရုံပဲ. . ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပုံစံကအတူတူပဲလေ
အဲ . . မတူတာက မြန်နှုန်းပါ။
M2 SATA က SATA ဆိုတဲ့အတိုင်း အမြင့်ဆုံး 600MB/s ရှိပါတယ်၊ M2 NVMe ကတော့ ထုတ်လုပ်သူအလိုက် 2100MB/s ကနေ 3500MB/s အထိရှိတတ်ပါတယ်။
အနည်းဆုံး သုံးဆလောက်တောင်ကွာတာနော 😯
ဈေးနှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း M2 ခြင်းအတူတူ NVMe က SATA ထက်ပိုများသွားပါတယ်။
ဂရပ်ဖစ်ကတ်အသေးစားလေးနဲ့ဆင်တူပီး မားသားဘုတ်ရဲ့ PCI-E slot မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုရပါတယ်။
ဈေးက 2.5" SATA, M2 တွေနဲ့ယှဉ်ရင် တော်တော်ကြီးကိုကွာဟတဲ့အတွက် အတော်အသင့်အသုံးပြုလေ့မရှိကြပါဘူး။
သင်ဟာ အစဉ်အဆက် HDD ကိုသာအသုံးပြုရာကနေ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် SSD နဲ့ တွဲသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 2.5" SATA SSD တွေကို ပထမဆုံး စဉ်းစားရမှာပါ၊ ဈေးလည်းအသက်သာဆုံးဖြစ်သလို မားသားဘုတ်တိုင်းနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက် သူ့ကိုသာရွေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
SSD ထဲမှာတော့ အနိမ့်ဆုံးဆိုပီး လျှော့တော့မတွက်ပါနဲ့၊ သင့်ရဲ့ ဟာ့ဒစ်ထက် လေးငါးဆလောက်မြန်ပါတယ်။
M2 ကိုတော့ မိမိရဲ့ မားသားဘုတ်မှာ M2 slot လည်းပါမယ်၊ NVMe လည်း အထောက်အပံ့ပေးတယ်ဆိုရင် တစ်ခါတည်း M2 NVMe ကိုသာသုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ M2 SATA ကျ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ 2.5" SATA နဲ့ မြန်နှုန်းကမထူးခြားနားမို့ပါ။
ိုငွေဆိုတာက ကိုယ့်အတွက်အတားအဆီးမဟုတ်ဘူး၊ မျက်စိထဲမှာလည်း ဂရပ်ဖစ်ကတ်နဲ့အပြိုင် လှတပတလေးမြင်ချင်သပဆိုရင်တော့ PCIE SSD ကိုသာရွေးလိုက်ပါ။
(ပုံမှာ ဘယ်ကနေညာ SATA 2.5" / M2 / PCIE)
Post By Teacher
[Unicode]ဖတျရနျ Solid State Drive လို့ချေါတဲ့ SSD တှကေ ကနြျောတို့နစေ့ဉျထိတှနေ့ကြေ ဟာ့ဒဈ (HDD) တှထေကျအဆမြားစှာပိုကာငျး ပိုမွနျတာတော့ဟုတျတယ်။
အဲလိုမွနျတာကိုမှ SSD တှဟော သူတို့ရဲ့ အမြိုးအစား မူကှဲအလိုကျ အနိမျ့အမွငျ့ရှိကွပွနျပါသေးတယျ။
SSD ကို SATA, M2, PCIE (add-in card) ဆိုပီး သုံးမြိုးခှဲထားပါတယျ။
SATA SSD က 2.5လကျမမို့ ပုံမှနျမွငျတှနေ့ကြေ laptop ဟာ့ဒဈတှနေဲ့ အရှယျအစားတူညီပီး မွနျနှုနျးအနနေဲ့ 600MB/s အထိရှိပါတယျ။
SSD တှထေဲမှာ SATA က စြေးနှုနျးအားဖွငျ့အနညျးဆုံးဖွဈတာမို့ SSD စတငျအသုံးပွုတဲ့သူတှအေနနေဲ့ အမြားဆုံးရှေးခယျြလရှေိ့တဲ့ အမြိုးအစားလညျးဖွဈတယျ။
M2 က ရုတျတရကျကွညျ့ရငျ ကှနျပြူတာ RAM နဲ့ ဆငျသယောငျရှိပွီး သူ့ကို မားသားဘုတျရဲ့ M2 slot မှာ စိုကျကာအသုံးပွုရပါတယျ။ (M2 slot ဟာ မားသားဘုတျတိုငျးမှာမပါဝငျပဲ Intel 6th gen Skylake မှသာစတငျပါဝငျလာပါတယျ)
M2 ကို transfer protocol အနနေဲ့ နှဈမြိုးထပျမံခှဲခွားထားပါသေးတယျ၊ M2 SATA SSD နဲ့ M2 NVMe SSD ဆိုပီး။
M2 SATA နဲ့ M2 NVMe ဘယျလိုတှကှောလညျး ?
တပျဆငျပုံ တပျဆငျနညျးကတော့အတူတူပါပဲ. . M2 slot လေးမှာ စိုကျလိုကျရုံပဲ. . ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ပုံစံကအတူတူပဲလေ
အဲ . . မတူတာက မွနျနှုနျးပါ။
M2 SATA က SATA ဆိုတဲ့အတိုငျး အမွငျ့ဆုံး 600MB/s ရှိပါတယျ၊ M2 NVMe ကတော့ ထုတျလုပျသူအလိုကျ 2100MB/s ကနေ 3500MB/s အထိရှိတတျပါတယျ။
အနညျးဆုံး သုံးဆလောကျတောငျကှာတာနော 😯
စြေးနှုနျးကိုကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး M2 ခွငျးအတူတူ NVMe က SATA ထကျပိုမြားသှားပါတယျ။
ဂရပျဖဈကတျအသေးစားလေးနဲ့ဆငျတူပီး မားသားဘုတျရဲ့ PCI-E slot မှာ တပျဆငျအသုံးပွုရပါတယျ။
စြေးက 2.5" SATA, M2 တှနေဲ့ယှဉျရငျ တျောတျောကွီးကိုကှာဟတဲ့အတှကျ အတျောအသငျ့အသုံးပွုလမေ့ရှိကွပါဘူး။
သငျဟာ အစဉျအဆကျ HDD ကိုသာအသုံးပွုရာကနေ အပွောငျးအလဲဖွဈအောငျ SSD နဲ့ တှဲသုံးကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ 2.5" SATA SSD တှကေို ပထမဆုံး စဉျးစားရမှာပါ၊ စြေးလညျးအသကျသာဆုံးဖွဈသလို မားသားဘုတျတိုငျးနဲ့လညျးအသုံးပွုလို့ရတဲ့အတှကျ သူ့ကိုသာရှေးဖို့တိုကျတှနျးပါတယျ။
SSD ထဲမှာတော့ အနိမျ့ဆုံးဆိုပီး လြှော့တော့မတှကျပါနဲ့၊ သငျ့ရဲ့ ဟာ့ဒဈထကျ လေးငါးဆလောကျမွနျပါတယျ။
M2 ကိုတော့ မိမိရဲ့ မားသားဘုတျမှာ M2 slot လညျးပါမယျ၊ NVMe လညျး အထောကျအပံ့ပေးတယျဆိုရငျ တဈခါတညျး M2 NVMe ကိုသာသုံးပါလို့ပွောခငျြပါတယျ။ M2 SATA ကြ အပျေါကပွောခဲ့တဲ့ 2.5" SATA နဲ့ မွနျနှုနျးကမထူးခွားနားမို့ပါ။
ိုငှဆေိုတာက ကိုယျ့အတှကျအတားအဆီးမဟုတျဘူး၊ မကျြစိထဲမှာလညျး ဂရပျဖဈကတျနဲ့အပွိုငျ လှတပတလေးမွငျခငျြသပဆိုရငျတော့ PCIE SSD ကိုသာရှေးလိုကျပါ။
(ပုံမှာ ဘယျကနညော SATA 2.5" / M2 / PCIE)
မတူညီသော SSD မျိုးကွဲများအား ခွဲခြားကြည့်ခြင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:04 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Solid State Drive လို့ခေါ်တဲ့ SSD တွေက ကျနော်တို့နေ့စဉ်ထိတွေ့နေကျ ဟာ့ဒစ် (HDD) တွေထက်အဆများစွာပိုကာင်း ပိုမြန်တာတော့ဟ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:04 PM